के लद्दाख भि’डन्तमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना पनि मा’रिएका हुन ? चीनले बल्ल दियो यस्तो जवाफ — Sanchar Kendra
के लद्दाख भि’डन्तमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना पनि मा’रिएका हुन ? चीनले बल्ल दियो यस्तो जवाफ
काठमाडाैं । पूर्वी लद्दाखको गलवान घाटीमा भारत र चीनको सीमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा दशकौं पछि पुनः तनावको स्थिती पैदा भएको छ । सोमबार राती चीन र भारतको सेनाबीच भएको हिं’स्र’क झ’ड’प’मा २० भारतीय सैनिकको मृ’त्यु भयो । सुरुमा तीन जवानको मृत्युको खबर आएको थियो तर पछि भारतीय सेनाले आफैं बयान जारी गरेर गम्भीर रुपमा घाइते अन्य १७ जवानको पनि मृ’त्यु भएको जानकारी दिएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पूरा घटनाबारे भने, ‘दुबै देशका सिनियर कमान्डरबीच बैठक भयो र तनाव कम गर्ने विषयमा सहमति बन्यो । सबैकुरा छलफलको हिसाबले अघि बढ्ला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौं । १५ जून अबेर राती चिनियाँ सेनाले अचानक व्यवहार परिवर्तन गर्यो । चीनले एकतर्फी निर्णय लिँदै यथास्थितीलाई अस्विकार गर्यो र फलस्वरुपः दुबै तिरबाट हिं’स्र’क झ’ड’प भयो । दुबै तर्फका मानिसहरु हताहत भए, जसलाई रोक्न सकिन्थ्यो तर चीनले सम्झौतालाई इमान्दारिताका साथ पालना गरेन ।’
के चिनियाँ सैनिक पनि मा’रिएका छन् ?
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘संसारका दुई ठूला विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देश भारत र चीनबीच मतभेदभन्दा पनि सहमतिको आवश्यकता छ । आ–आफ्ना नागरिकको हित र आशाका अनुसार सम्बन्धलाई सहि बाटोमा अघि बढाएर सहमतिमा पुगेर त्यसको पालना गर्नु नै दुबै देशको आवश्यकता हो । हामीलाई आशा छ कि भारतीय पक्ष हामीसँग काम गर्नेछ र दुई देश एकैसाथ अघि बढ्नेछौं ।’ पिटिआईले सोधेको ‘अब सीमामा हिंस्रक झडप हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाओ लिजियानले भने, ‘स्पष्ट छ कि अब हामी थप विवाद चाहँदैनौं ।’
यस्तै चीनले अमेरिकाको इसारामा आफूविरुद्ध लाग्ने भारतका लागि जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । भारत चीन सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका ८१ समूहले अभ्यास सुरु गरेको जनाउँदै चीनले युद्धका लागि विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरिएकोसमेत प्रष्ट पारेको छ । चीनले भारतीय मिडिया पश्चिमा मिडियाजस्तै चीनविरुद्ध प्रयोग भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
चीनले दक्षिण एसियामा भारतले विभिन्न प्रकारका विवाद निम्ताएको दावी गरेको समाचार ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ । ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र हो । ग्लोबल टाइम्पसले लेखेको सम्पादकीय तथा समाचार टिप्पणीलाई सरकारको आधिकारीक दृष्टिकोणका रुपमा लिने गरिन्छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘कोरोना महामारीकै समयमा भारतले चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग सीमा विवाद गरिरहेको छ । पाकिस्तान चीनको विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार हो । नेपालसँग चीनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । यी दुई देश चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा साझेदार हुन् । यदि भारतले सीमा विवादलाई बढाउँदै लैजाने अवस्थामा दुई वा तीनतर्फबाट सैन्य दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यहाँसम्मकी तीनवटै देशले सैन्य दबाब दिएमा के हुन्छ ? भारतका लागि त्यो समय विनाशकारी हार हुनसक्छ ।’
सीमालाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई देशबीच यु’द्धसमेत भएको थियो । करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ । कतिपय भूभाग दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतका तर्फबाट संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पोलिस आईटीबीपी ले नै सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ ।